H & H hotmelt inonamira firimu: Chinja maitiro emusangano wemangwanani
H&H hotmelt adhesives kambani yakazofunga kushandura maitiro emusangano wemangwanani kuburikidza nehurukuro, nekuti iyo nzira kumberi kuitira kukurudzira kushingairira kwevanhu vese kutora chikamu mune kuti wekupedzisira uyo anopinda mukamuri yemusangano anofanira kunge ari iye akagumisa madingindira uye conte ...
"Kuzvidzora kunondipa rusununguko" yekutanga Hehe Mukombe 6KM Hutano Kumhanya!
Mangwanani-ngwanani kwaApril 15, vakwikwidzi veHehe vakaungana kufekitori yeQidong. Iine sirogani "Kuzvidzora kunondipa rusununguko", yekutanga Hehe Mukombe 6KM Hutano Kumhanya zvakatanga zviri pamutemo. 6KM kumhanya kwakanaka, iyo trajectory inoratidzwa mumufananidzo: Hehe Nyowani Mater ...
Hehe masheya anokukoka iwe kuti utore chikamu muJinjiang shangu yezvinhu zvekuratidzira!
nhoroondo yekambani Jiangsu Hehe Nyowani Zvishandiso Co, Ltd., yakatanga muna 2004, inyanzvi yekuita basa yakatsaurirwa kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kweanoshamwaridzana anopisa anyauka mafirimu ekunamatira uye yepamusorosoro bhizinesi muJiangsu Province. 1. ISO9001 yemhando yekutarisira syst ...
H & H Hotmelt inonamira firimu: Tichapinda mune yechi 22 China (Jinjiang) International Footwear Viwanda & Yechishanu International Sports Viwanda Expo
Tichapinda mu22nd China (Jinjiang) International Footwear Industry & Fifth International Sports Industry Expo muJinjiang City, Fujian Province kubva 19.04.2021-22.04.2021. Panguva iyoyo, isu tinoratidza yedu inopisa inyauka namira firimu zvigadzirwa zvinoshandiswa mumunda shangu zvinhu, uye kukuratidzai th ...
H & H inopisa inyauka inonamira firimu: kuve ne kudzidziswa pamafungiro nzira
ne admin pane 21-03-29
Vhiki rapfuura, vashandi vedu vakapinda muchirongwa chemazuva matatu pamusoro penzira dzekufunga nekushanda nzira. Muchiitiko ichi, munhu wese anogamuchira ruzivo uye ruzivo nekubatana pamwe, kukunda matambudziko uye kupedzisa mabasa akabatanidzwa. Mudzidzisi achataura zvimwe chokwadi uye hanya ...
H & H inopisa inyauka inonamira firimu: Ese makemikari mbishi zvinhu zviri kuchengeta mutengo uchikwira
Vadiwa vatengi Sezvo chimwe chikonzero chisingafungidzike, mutengo wemakemikari mbichana zvinhu zviri kukwira kuwedzera nguva pfupi yadarika. Isu tinomanikidzwa kuchinja mutengo wedu panguva yemutengo wedutu uyu. Yedu yese EVA, TPU, PES, PA, PO zvigadzirwa zvinoshandurwa pamutengo wepakati. Pano isu kujekesa kwako bhuku, ndinovimba unonzwisisa th ...
H & H hotmelt inonamira firimu: Musangano wekugovana manzwiro nezvechiitiko musi weSvondo rapfuura
H & H hotmelt inonamatira firimu: Musangano wekugovana manzwiro nezvechiitiko musi weSvondo rapfuura Mangwanani ano, H & H yekutengesa nzvimbo yakaronga musangano wekugovana manzwiro uye pfungwa nezve chiitiko cheSvondo rapfuura. Panguva yemusangano, munhu wese akagovana yakawanda yechokwadi pfungwa uye manzwiro kubvira ivo ...
H & H inopisa inyauka inonamira firimu: Kuvandudza mhando yemusangano wedhipatimendi
Tasvika pamhedziso yekuti musangano wedhipatimendi unofanirwa kuitwa nenzira inoshanda. Anogashira akaronga musoro wenyaya nezve izvi uye regai mamaneja mazhinji nevashandi kuti vataure zvavanofunga nezano Zvinoenderana nemaonero kubva kumaneja weHR, zvinofanirwa kudzora nguva ye ...
H & H hotmelt inonamira firimu: mumwe wevatengi vedu akauya kuzoongorora kugadzirwa
Nezuro mumwe wevatengi vedu kubva kuAmerica akauya kuzoongorora kugadzirwa. Vakadzi vaviri vane hunhu uye vane mutsa. Zvakatora maawa anenge 2,5 kutyaira kubva kuHongqiao Airport kuenda kufekitori yedu. Tangosvika fekitori muQidong, Nantong, isu takapedza masikati nekukurumidza uye tarisa kune inspecti ...
Zvimiro zve pes inopisa inyauka inonamira firimu
Hot-melt inonamira firimu rudzi rwezvinhu zvinogona kuve zvinopisa-kusungunuka zvakasungirirwa kuita firimu nehumwe ukobvu, uye kupisa-kunyauka kunamatira kubatana kunoshandiswa pakati pezvinhu. Kupisa kunyauka kunamatira firimu haisi imwechete yekunamatira, asi rudzi rweglue. Zvakadai se PE, EVA, PA, PU, ​​PES, yakagadziriswa polye ...
Iko kushandiswa kweHehe kupisa kunyauka kunamatira mune isina musono yekufukidza madziro
Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemadziro asina musono anofukidza indasitiri, seimwe yezvakakosha zvinhu zvekushongedza imba, chifukidzo chemadziro hachidi kungoitwa chakanaka chete, asi chinodawo kuve chakachengetedza nharaunda. Yetsika glue kana inonamira mupunga glue inonamira kumadziro akafukidza, mu ...
Kupisa kunyauka kunamatira firimu laminating muchina
Hot yakanyunguduka inonamira firimu laminating michina inowanzo kuve yakakamurwa kuita maviri marudzi maererano nekushanda nzira, kudzvanya mhando uye rinoumbwa mhando. 1.Kupurudzira michina Makuriro ekushandisa, chete inokodzera machira ezveshiti, kwete yekumonera roll, senge zviratidzo zvekupfeka, shangu zvigadzirwa, nezvimwe.